Puntland iyo Somaliland Oo Guulo Kala Sheegtay iyo Khasaaraha Ka dhashay Dagaalka Tukaraq | SAHAN ONLINE
Puntland iyo Somaliland Oo Guulo Kala Sheegtay iyo Khasaaraha Ka dhashay Dagaalka Tukaraq
GAROOWE –Puntland iyo Somaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay Dagaal aad u culus oo maanta maanta ka dhacay Degaanka Tukaraq kaas oo dhaliyaya khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo gaadiid la kala qabsaday
Dagaalkan oo bilaabmay 5:30 subaxnimo, socdayna muddo 6 saacadood ku dhow wuxuu si garbo siman uga socday saddex Aag oo kala ah dhanka Hawdka ah ee Laba madaxley , Dhinaca waqooyi ee dhoodida ee Bariga tukaraq ah iyo Wadada Laamiga ee Buundada Tukaraq.
Ciidamada Puntland ayaa guulo ka gaaray labo aag oo dagaalku ka soday, waxayna qabsadeen saldhigyadii fadhiyeen ciidamada Somaliland. Dagaalka ka dhacay Aaga laamiga ah oo ahaa midka ugu culus ayaa Ciidamada Somaliland waxay difaaca ka galeen buundada Tukaraq, halkaasi oo dagaal xoog leh uu ka dhacay, balse aan ciidamada Puntland u suurtagalin inay ka saaraan ciidamada Somaliland.
Puntland oo Ka Hadashay Dagaalka.
Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Qarjab iyo Afhayeenka Xukuumada Puntland Cabdullaahi Quraanjecel oo ka hadlay ayaa ku eedeeyay maamulka Somaliland inay soo weerareen fadhiisamaha ciidamada Puntland, balse ay iska difaaceen oo dib u qabsadeen saldhigyadii ay ka soo duuleen
Wasiirka Warfaafinta Puntland wuxuu sheegay in 10 km oo dhinaca laamiga ah ay dib u riiceen Ciidamada Somaliland, islamarkaana ay khasaaro badana ay gaarsiiyeen
Somaliland oo Eedaysay Puntland.
Wasiirada Gaashaandhiga iyo warfaafinta Somaliland oo shir jaraa’id ku qabtay Magaaladda Hargaysa ayaa ku eedeeyay dagaalka ka dhacay maanta Tukaraq dowladda Federaalka Soomaaliyeed.
Wasiirka Gaashaandhiga Ciise Axmed Xawar wuxuu sheegay in ciidamadooda laga soo weeraray saddex Aag, oo ay si adag iskaga difaaceen , sidoo kale ciidamadoodu ay gaareen Saldhigyadii laga soo weeraray ciidamadooda
Wasiirka Warfaafinta Somaliland C/raxmaan Guri-barwaaqo oo isna ka hadlay dagaalka, waxaa uu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay soo weerareen Somaliland iyagoo la tacaalaya gurmadka loo fidinayo duufaanadii ku dhuftay qaybo ka mid ah Degaanada xeebaha ah ee Somaliland.
Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa ilaa hadda laga hayn warbixin rasmi ah. Cusbitaalka caasimadda Garoowe ayaa la soo gaarsiiyay ciidamo ku soo dhaawacmay dagaalka, Halka Magaalooyinka Laascaano iyo Burcana la geeyay askar ku dhaawacantay dagaalka ee dhinaca Somaliland.
15 bishan January ee 2018ka ayaa dagaal culus oo Puntland iyo Somaliland ku dhexmaray Aaga Tukaraq waxaa ka dhashay khasaare Naf iyo Maalba leh, iyadoo ayan jirin dhul la kala qabsaday.